Caalamka Online » XOG: UAE Joojisay diyaarad Muqdisho u soo qaadi lahayd Cumar C/rashiid
XOG: UAE Joojisay diyaarad Muqdisho u soo qaadi lahayd Cumar C/rashiid
Ilo xog ogaal ah ayaa Wakaaladda Wararka Warqaad.com u sheegay in Dowladda Imaaraadka ay hakad gelisay safar uu Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah senatarada Aqalka sare Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ku imaan lahaa Soomaaliya.
Cumar C/rashiid ayaa lagu waday inuu yimaado Soomaaliya,inkastoo ay soo baxeen warar sheegaya in Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya uu ka dego magaalada Garowe si halkaasi loogu kulansiiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo booqasho ku joogo Puntland.
Dowladda Imaaraadka oo ka war heshay wararka sheegaya in la isku soo dhoweeyo Madaxweynaha iyo Senatorka ayaa baajisay safarka Cumar C/rashiid kuna war gelisay inuu joogo ilaa iyo amar danbe.
Sarkaal magaciisa diiday oo ka mid ah Qolada Mucaaradka ayaa inoo sheegay in warkaan uu soo gaaray saacado ka hor,balse uusan xaqiijin karin xaqiiqdiisa.
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ayaa hormuud u ah Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada Mucaaradka ku ah Dowladda Farmaajo,isagoo uga wakiil ah Imaaraadka carabta oo maalgelineysa Mucaaradka Dowladda ku kacsan.
Waxgaradka iyo Siyaasyiinta Puntland ayaa dadaal ugu jira sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaarihii hore ee hadda ka mid ah siyaasiyiinta ugu weyn Mucaaradka Soomaaliya.
Ganacsatada Shiishada ee dalka Kenya ayaa dacwad u gudbiyay Maxkamada sare ee dalka Kenya,taasoo ku aadan in gabi ahaanba la mamnuucay ka ganacsiga shiishada dalka Kenya.